OMN: Gabaasa Raawwii Hojii Galmee Barnoota Afaan Oromoo Booletti (Hagayya 17, 2019) -
Via Caalaa Hayiluu Abaataa
Waamicha hiriiraa !!
Ibsa Gamtaa Barattoota oromoo Finfinnee irraa kenname.
Qormaata Hatame fi Dogoggora Qormaata kutaa 12 irratti raawwatamee Gosa Barnoota 3 ol ta’ee odoo/otoo/ jiruu Mootummaan Gosa barnoota tokkoo ykn Aptitude qofaatu Dogoggorame. Aptitude qofa Sirreessera jedhee deebii kennuun fudhatama Hin qabu.
Qormaatichi bara kanaa kutaa 12 Guutummaatti haqamuu qaba.
Shira Diinaa itti yaadamee Abdii borii Barattoota oromoo firii Qormaata kutaa 12 fudhanii irratti raawwate kan guutuu oromiyaa waliin dhaabbachuu ilaalaata.
Gochaa badaa Mootummaa Yakkaamaa ,Walmakaa fi Buuka’aa Hiihaadig/EPRDF/ Tiin Saanyii doomsuu Barattoota keenya irratti raawwate jiru akka furmanni Atattamaan kennamu Ni gaafanna .
Qaamoota badii kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan Barattoonni fi maatii Baattoota oromiyaa Mootummaaf gaaffii keenya akka dhiiffannu Barattoota maraaf waamichi dhiyaateera.
Shira badii Qormaata kutaa 12 irratti raawwatameef mootummaan deebii quubsaa hanga ji’a Hagayya Guyyaa Roobiitti akka nuuf deebi’uu Ni gaaffanna.
Deebii quubsaan hanga Guyyaa Roobii kanaa tti Yoo nuuf deebi’uu baate Hagayya Roobii 15/12/2011 Ganama sa’a 2:00 calqabee Gaaffiin keenya oromiyaa maratti hiriira Nagaan Ni gaafanna.
Baratoonni sadarkaa hunda irra jiran gochi badaan kun hunda keenya waan ilaalatuuf itti hirmaatu.
Barataan hundi Baadiyaa fi Magaalaan Waliif bilbiluu Hin daggatiina.
Gamtaa Baratoota .
EPRDF Oromoo irratti Yakka Sanyii Duguggaa Gaggeessuu itti fufte!
EPRDF gochaa faashistummaa isaa itti fufuun ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru. Waraanni koloneer Abiyi gochaa sanyii duguuggi Oromoo irratti gaggeessaa jiru guyyaa 16/08/2019 godiina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa ganda Gaalessa sookkee keessatti:
1. Obboo Gananaa Badhaasoo fi
2. Obboo Haasan Adulaa osoo isaan oobruu isaanii keessaa hojii qonnaa irra jiranii Waraanni weerartuu EPRDF rasaasan rukutanii ajjeesan.
Aanaa Qarcaa ganda Gaalessa Nageessoo keessatti:
1. Obboo Nadhuu Alakee fi
2. Obboo Jaarsoo Birbirsaa kan jedhaman Waraanni weerartuu EPRDF rasaasan rukutee ajjeeste.
Akkasumas ganda Gaalessa Sookkee keessatti manaa fi qabeenya obboo Maammad Taafasaa Aagaa, Waraanni weerartuu EPRDF gubdee, loonii fi qabeenya biroo guutumaa guutuutti jalaa balleessitee jirti.
Yaa Oromoo! Gochaa OPDO kana ilaalaa. Waraana weerartuu uummatatti bobbaasanii fixaa, uummati keenyi dhumaa jira jedhanii dubbachuun gatii hin qabu! Oromoon Tarkaanfiitti sirreessaa fudhachuu qaba! Waraana uummata weeraree jiru kun uummata keessaa bahuu qaba! Waraanni weerartuu kun jireenya uummataa gama hedduun goolaa jira, kan rasaasaan fixaa jiran caalaa dhukkuba daddarbaan biyya faalaa akka jiranis ogeessoti fayyaa yaaddoo isaanii ibsachaa jiru! ‘Waraannii EPRDF Oromiyaa weeraree jiru uummata keessaa haa bahu!’ jedhu dhaadannoo kee keessa galfadhu!
← The Sidama Civilians Released by Court on Bail Rearrested by South Ethiopia Region and Federal Police ONN LIVE | SBO HAGAYYA 17 2019 fi ልዩ ዝግጅት ከቡርቃ ዝምታ እስከ ቲራቮሎ ዋሻ →